कसरी लाग्ला न्यायधीश चोलेन्द्रलाई संसदको अवहेलना मुद्दा ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कसरी लाग्ला न्यायधीश चोलेन्द्रलाई संसदको अवहेलना मुद्दा ?
सर्बोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेश पछि सरकार संकटमा परेको छ। प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालको राजनीतिक जीवनमा तत्कालिन प्रधान सेनापति रुक्मङगत कट्वाल पछि यो दोस्रो घटना हो। कानुनले भन्छ एउटा अपराध लुकाउन अपराधीले सयौ अपरारध गर्छ।
हो त्यस्तै भयो यो सरकारका लागि । सिलवाल प्रकरणमा सरकारले देखाएको बहुलठ्ठी पनलाई आफु अनुकुल सोझ्याउल खोज्दा सरकार एक अपराध लुकाउन सयौ अपराध गर्ने लाईनमा उभिएको छ।
संसदको अवहेलनाको खेताला तर्क
अहिले एकाथरी बौद्धिक भनिएका मानिस सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई समेत महाभियोग लगाउने चर्चा गरीरहेका छन् । यसरी आफुलाई चित्त नबुझेको फैसला आउने बित्तिकै महाभियोग लगाउने हो भने अदालत रित्तो हुन्छ । गुरिल्लाको अदालत चलाएर आएका महान्यधिबक्ताबाट न्याय बच्ला भनेर सोच्न पनि सकिने बिषय होइन । तर प्रश्न उठछ कसरी पास हुन्छ संसदको अवहेलानाको मुद्धा ?
सरकारले सबै नौटंकी गर्नु परेको नै संसदमा आफुसंग दुई तिहाई नभएर हो । जससंग दुई तिहाईका प्यासले सरकार बिष भएपनि पिउने बाटोमा गएको छ । तर तिर्खा लाग्यो भन्र्दैमा बिष पिउनु कति बुद्धिमानी हो ? हो अहिले सरकारले प्यास लाग्यो भनेर सुशीला कार्की विरुद्ध बिष पिईसकेको छ । त्यसको प्रभाव शुक्रबारको सर्बोच्चको फैसला बाट पाईसेको छ । अव सरकारले फेरी संसदको अवहेलनामा चोलेन्द्रलाई संसदमा मुद्धा चलाउनु भनेका अर्को पटक बिष पिउनु जस्तै हो । जसबाट सरकारको असामयिक निधन हुन सक्छ ।
संसदमा अबहेलाना मुद्धा चलाउछु भन्नु पछारिएको मान्छेले चोर औला देखाएर पख्लास भन्नु जस्तै हो । सरकारसंग दुई तिहाई नभएर कन्तबिजोग छ । यहि भएर मधेशी मोर्चाका माग सरकार आफैले पोल्टोमा राखेर बस्नु परेको छ । संसदले सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश विरुद्ध अबहेलानको मुद्धा चलाउदा के गर्नुपर्छ भन्ने पनि अलिकति ख्याल राख्नु पर्ने हो बुद्धिजिवि भनि कहलिएकाले । सरकारले लेखेको गीत गाउने मात्र हो भने त भन्नु पनि केही छैन । तर बुद्धिजिवि भन्नेले यो कुराको पनि ख्याल गर्नूपर्ने हो ।
कसरी लाग्छ संसदको अवहेलना ?
नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धन्तलाई मध्यनजर गरेर संसद र अदालतको आ आफ्रनै क्षेत्रधिकार तय भएका छन। अदालतमा बिचाराधिन मुद्धामा संसदले कुनै निर्णय वा छलफल गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । तर प्रहरी नायव महानिरीक्षकको मुद्धाको आन्तिम किनारा नलाग्दै यसलाई एउटा मुद्धा बनाएर सरकारले संसदमा सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्यायो। तर शुक्रबारको अअदालतको आदेशले त्यसलाई बदर गरी दिएको छ । एक छिनलाई चोलेन्द्र शम्सेर विरुद्ध सरकाररले संसदमा अवहेलान मुद्धा ल्यायो रे ।
तर त्यसलाई पास गर्न सदनमा दुई तिहाई मत चाहिदैन? एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल भन्छन ‘ सर्बोच्चका न्यायधीशको बिषयमा सबैधानिक निकायका पदाधिकारी सरहको व्यावस्था लागु हुन्छ। यसको सिधा अर्थ हो संसदमा दुई तिहाई मत चाहिन्छ । अनि दुई तिहाई नपाउदै अनेक गल्ति गर्दै हिडको सरकारले कसरी पास गराउछ अवहेलना मुद्धा ?